Izongezo zokutya, i-Sorbic Acid, i-Monk Fruit-Tianjia
Inyama & Iinkukhu
Izincedisi zeZondlo zezilwanyana
IShanghai Tianjia Biochemical Co., Ltd yasekwa ngo-2011 kwaye ibekwe eShanghai, eTshayina.
Siziingcali ikakhulu kwishishini leZithako zoKutya, amayeza kunye nezongezo zokutya.
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 siphuhlisa kwaye sifunda kushishino, sakha ubudlelwane bexesha elide kunye namaqabane ethu e-China nakwamanye amazwe.
Ngokuqondwa koMgangatho kuqala, ulawulo lweMfezeko, kunye neNzuzo efanayo, besisoloko sixhasa amaqabane ethu kunye nabathengi baphuhlise iimveliso ezininzi ezintsha kunye neemarike, zenze unxibelelwano oluthembekileyo olubaluleke kakhulu kuwo omabini amacala.Silandela umgaqo-nkqubo "weBhanti enye kunye neNdlela enye" ​​ngokusondeleyo, sihlala siphuhlisa imarike entsha kunye neemveliso, negalelo kumzamo wethu othobekileyo kushishino lokuthumela ngaphandle kweTshayina.
Sineqela lobuchwephesha kunye namava eligxile kwintengiso, ekufumaneni izinto, kwizinto zokusebenza, kwiinshurensi nasemva kwenkonzo yokuthengisa.
Lutein Retina, I-Lutein Yamehlo Omileyo, Monk Fruit Erythritol, Lutein Guard, Lutein okuziinkozo, Monk Fruit Cena,